हामी किन सधैँ दुःखी हुन्छौँ ?
स्वामी विवेकानन्द हिन्दू दर्शनका प्रसिद्ध विद्वान् थिए । उनी अमेरिकामा रहेको शिकागोमा आयोजित सन् १८९३ मा भएको ‘विश्व धर्म सभा’मा सनातन हिन्दू धर्मको तर्फबाट प्रतिनिधि थिए । उनले सनातन धर्मको आध्यात्मिकताद्वारा परिपूर्ण वेदान्त दर्शनलाई पश्चिमेली देशहरूमा आफ्नो वक्तृत्वकलाको बलमानै पुर्याएका थिए। उनले अमेरिकामा भएको भाषणको पहिलो सम्बोधन अमेरिकन दाजुभाई तथा दिदीबहिनी भन्ने वाक्यले नै सबैको मन जितेका थिए ।
कलकत्ताको धनाड्य बङ्गाली परिवारमा जन्मिएका विवेकानन्दको झुकाव आध्यात्मिकता तर्फ थियो। उनि आफ्ना गुरू रामकृष्ण परमहंसबाट धेरै प्रभावित थिए, जसबाट उनले ‘सम्पूर्ण जीवहरू परमात्माको एक अवतार हो, त्यसैकारण मानव जातिको सेवाबाट परमात्माको पनि सेवा हुन सक्छ’ भन्ने शिक्षा पाएका थिए।
विवेकानन्द अध्यात्म गुरु मात्र नभएर युवाहरुमा ऊर्जाको विकास गराउने उपदेशहरु पनि दिने गर्थे । विवेकानन्दले उनका गुरु रामकृष्णलाई जीवनसम्बन्धी तथ्यहरुबारे केही रोचक प्रश्नहरु गरेका थिए । ती प्रश्नका उत्तरहरु यस्ता छन्ः
जीवनमा राम्रा कामका लागि समय निकाल्न धेरै कठीन छ । जीवन जिउँदा किन यत्तिका समस्याहरु आइलाग्छन् र हामीलाई अल्झाउने गर्छन् ?
उत्तर – जीवनमा सबैलाई आफ्ना गतिविधिहरुले घेरेर राखेका हुन्छन् । तर यसको उत्पादकत्वमा मात्र हाम्रो जीवनको सही अर्थ भर पर्नेछ ।
आज जीवन किन यस्तो जटिल अवस्थामा छ ?
उत्तर – जीवनलाई विश्लेषण गर्न छोडेपछि मात्र यसको जटिलता कम हुँदै जानेछ । जीवनलाई आजको दिनमै जिउनु पर्छ । भोलि र हिजो भनेको हाम्रो कल्पना मात्रै हो वास्तविकता आजमा हुन्छ ।
त्यसो भए हामी किन सधैँ दुःखी हुन्छौँ ?
उत्तर – सधैँ सबैकुरामा तनाव लिइराख्ने हाम्रो बानी भइसक्यो । त्यसैले हामी कहिल्यै खुसी रहन सक्दैनौँ ।
राम्रो मानिसले मात्र किन सधैँ दुःख पाउँछ ?
उत्तर – हिरालाई चम्काउन धेरै रगड्नुपर्छ । सुनलाई शुद्ध बनाउन आगोमा तताउनु पर्छ । त्यस्तै राम्रो मान्छेहरुले गुज्रिनु पर्ने परीक्षाहरु अनुभव हुन् दुःख होइनन् । उनीहरुले दिनुपरेको परिक्षा कहिल्यै बेकार जाँदैन । यसले हाम्रो जीवन अझ सुन्दर अझ राम्रो बनाइदिन्छ ।
यसको मतलब यस्ता अनुभवहरु धेरै उपयोगी हुन्छन् ?
उत्तर – हो जिवनका सम्पूर्ण अनुभवहरुको आआफ्नै मूल्य हुन्छ । कठोर अनुभवहरु शिक्षक जस्तै हुन्छन् । पहिले तिनले परिक्षा लिन्छन् अनि त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ पढाउँछन् ।
जीवनमा सर्वोत्तम हासिल गर्न के गर्नुपर्छ ?
उत्तर – यसका लागि बिना कुनै पछुतो आफ्नो विगतको सामना गर्नुपर्छ । अनि आफ्नो वर्तमानलाई भने पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सम्हाल्न सक्नुपर्छ । र अन्त्यमा निडर भएर भविष्यको तयारी गर्नुपर्छ ।
कुनै कुनै बेलामा हामीलाई आफ्नो प्रार्थनाहरु बेकार भएजस्तो लाग्छ किन ?
उत्तर – कुनै पनि प्रार्थना कहिल्यै बेकार जादैनन् । आफ्नो आस्था कायम राख्दै डरलाई मनमस्तिष्कबाट निकाल्न सक्नुपर्छ । जीवन एउटा रहस्य हो जसलाई हामी आफैँले पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । तर यो कनै समस्या होइन जसलाई हामीले जीवनभर सुल्झिाइराख्नुपर्छ । यदि हामीले एकपटक जीवन कसरी जिउने भन्ने थाहा पायौँ भने साँच्चिकै जीवन आश्चर्यजनक लाग्न थाल्छ ।